ढोलाहिटी बुहारी हत्याकाण्डः उज्वललाई आजीवन काराबासको सजाय – jagritikhabar.com
ढोलाहिटी बुहारी हत्याकाण्डः उज्वललाई आजीवन काराबासको सजाय
काठमाडौं, २६ फागुन ।
घाँटी छिन्ने गरी खुकुरी प्रहार गरी बुहारीको हत्या गर्ने जेठाजुलाई ललितपुर जिल्ला अदालतले आजीवन काराबासको सजाय सुनाएको छ ।
अदालतले ललितपुर महानगरपालिका–२६ ढोलाहिटीका उज्वल महतलाई आजीवन कैदको सजाय सुनाएको हो । न्यायाधिश कृष्णराम कोइरालाको इजलासले फागुन ११ गते अभियोग मागदाबी पुगेको भन्दै कैद सजाय सुनाएको श्रेष्तेदार विष्णुप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार इजलासले पीडकबाट दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति समेत भराउन आदेश दिएको छ । २०७६ बैशाख २६ गते उज्वलले आफ्नै बुहारी अन्जना लामा महतको खुकुरीको प्रहार गरी घाँटी छिनालेर हत्या गरेका थिए । घाँटी शरीरबाट छुट्टिएको र शरीरभरी खुकुरी प्रहार गरी क्षतविक्षत पारेका थिए ।
बुहारीको घाँटी समेत छिनाई क्रुर विभत्स हत्या गरेको अनुसन्धानले देखाएपछि उज्वललाई जन्मकैद कैदको अभियोग लगाईएको थियो । उज्वल संगितकार समेत हुन् । कानको समस्या भएपछि उनी काम बन्द गरेर घरमै बसेका थिए ।
हत्या बारे अभियुक्त उज्वलले प्रहरी समक्ष दिएकाे बयान यस्तो थियो:
‘विगत केही महिना अगाडि देखी मेरो बुहारी अन्जना लामा महतले म लगायत मेरो परिवारलाई गर्नु पर्ने मान पर्यादा नराखि नराम्रो व्यवहार गरेको हुँदा मलाई निजदेखी भित्र भित्रै धेरै नै रिस उठी रहेको थियो । मैले मन मनै निज बुहारी अन्जना लामा महतलाई सिध्याउने उपयुक्त मौका खोजिरहेको थिएँ । त्यस्तैमा मिति २०७६।१।२६ गतेका दिन घरमा परिवारको सदस्यहरु कोही पनि नभएको र आमा पुष्पा महत पनि आफ्नै कोठामा मस्त सुतिरहेको अवस्थामा रहेकीले सोही मौका यही हो भन्ने लागी आफ्नो कोठामा भएको सानो खुकुरी झिकी यो खुकुरीले प्रहार गर्दा मर्दैन कि भनी सोच विचार गरेर आमा बुवा सुत्ने गरेको कोठामा राखिएको ठूलो धारिलो खुकुरी निकाली निज अन्जना लामा महत सुत्ने गरेको कोठमा विस्तारै प्रवेशगरी दुबै हातको बल प्रयोग गरी हातमा बोकेको ठूलो खुकुरीले टाउकोमा प्रहार गर्दा निजले मलाई देखि हातले छेक्न खोज्दा दुबै हात काटियो । र मैले पनि पुन खुकुरीले प्रहार गर्दा उनले खुट्टाले प्रतिकार गर्दा खुट्टा पनि काटियो । सोही बेला निजले प्रतिकार गर्न हानेको लात्तिले लागेर मेरो हातबाट खुकुरी फुत्किएर भुईमा झर्‍यो । उक्त ठूलो लामो खुकुरी हातबाट खस्ने क्रममा मेरो दाहिने हातको चोरी आँला समेत काटिएर औँलाको आधा भाग छिनेर भुईमा झर्‍यो । यस्तो अबस्थामा यत्तिकै छाडेमा निज भागी उम्की छरछिमेकमा हार गुहार गरेमा अन्य मानिसहरुले समेत थाहा पाएमा मलाई मार्छन् भन्ने डर लागेकाले निज बुहारी अन्जनालाई यत्तिकै छाड्नु हुन्न र मार्नै पर्छ भनेर हतार हतार भुईमा झरेको ठूलो लामो खुकुरी टिपी समाती घाइते भई विस्तारामा लडी रहेकी बुहारी अन्जनाको घाँटीमा लगातार निर्ममतापूर्वक प्रहार गर्दै गएर घाँटी छिनी सकेपछि पनि एकोहोरो निजको शरीरको अन्य विभिन्न भागमा प्रहार गरिरहेँ । निज बुहारी अन्जनालाई ठूलो धारिलो खुकुरीले प्रहार गर्दा उनको शरीरबाट निस्किएको रगत मेरो जीउ भरी लाग्यो । कोठाभरी रगतको छिटाहरु लाग्यो भने उनको विस्तारा लगायत कोठाको अन्य ठाउँमा रगतका आहाल भयो । निज चल्न, छटपटाउन छाडेपछि मात्रै मर्‍यो भनि ठानी खुकुरी प्रहार गर्न छाडेँ । त्यसपछि मैले पछाडि भिरेर बोकेको झोलाबाट सानो खुकुरी निकाली बुहारी लडीरहेको विस्तारामा राखेँ । बुहारी अन्जनालाई कर्तव्य गरी ज्यान मारी हत्या गरेपछि मलाई कसैले कही गर्छकि भन्ने डरले मैले ठूलो धारिलो खुकुरी हातमा नै बोकी सो कोठाबाट बाहिर निस्केर घरको बरण्डामा नै बसिरहेँ । त्यसको केही समयपछि प्रहरी टोली घटनास्थलमा खटिआएको देखेपछि मैले हातमा लिएको खुकुरी बरण्डाको भुईमा छाडेँ र त्यसपछि प्रहरीले मलाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।
तपाईको समाचार, लेख /रचना वा सुझाव र प्रतिक्रिया भएमा [email protected] मा पठाउनुहोला ।
वैदेशिक रोजगारको पीडा : महिलालाई मात्रै लाञ्छना किन ?
पैसा पठाउनु त परको कुरा, मेरो बुढा साउदीबाट फर्केर घर समेत आएन ।’ वैदेशिक...
पढ्दा तितो लाग्न सक्छ तर केटिहरुको लागि सत्य छ
सन्तोष कार्की मौसुफ म यो भन्दिन कि प्रेम गर्नु गलत हो , तर यस्तो...
सुशान्त प्रकरणमा मुछिएकी रिया माथि कसले गर्यो अपमान ? यस्तो भन्छ रिपोर्ट !
अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूतकाे मृ*त्यु प्रकरणमा रिया चक्रवर्तीमाथि मूलधारका मिडियाकाे उपस्थिति (कभरेज) लाई लिएर...
इन्डोनेसियामा शक्तिशाली भूकम्प : १५ हजार विस्थापित